Oganda - ALinks
Lahatsoratra momba an'i Uganda
Banky tsara indrindra any Uganda
Enga anie 5, 2022 Demi Banks, Oganda
Ny banky any Ouganda dia manara-maso ny Benki Kuu ya Uganda na Bank of Uganda, ny banky foibe ao amin'ny firenena. Banky an'ny fanjakana izy io naorina tamin'ny 1966. Ankoatra ny fitantanana ny banky any Ouganda, dia mampiroborobo
Ahoana ny fomba hahazoana visa ho an'i Uganda?
Aprily 18, 2022 Shubham Sharma Oganda, visa
Asa any Uganda !!
Oktobra 15, 2021 Demi asa, Oganda
Oganda dia firenena an-dàlam-pandrosoana manana fomba fijery tsara momba ny fitomboana. Nandritra ny taona vitsivitsy ho avy dia mampiseho làlana miakatra ny toekaren'izy ireo, hoy ny Banky Iraisam-pirenena. Noho izany, raha Expats ianao ary te-hiasa any Oganda, afaka izahay
SISTEM TSY MAZAVA FAMPISEHOANA ANY ATANDRIANA
Desambra 1, 2019 Demi fahasalamana, Oganda
Ny fikarakarana ara-pahasalamana any Oganda Oganda dia manana rafitra ara-pahasalamana nasionaly voarindra sy fanaterana ny fahasalamana napetraka ao anatin'ny asa stratejika sy fifantohana. (HSSIP 11, Jolay 2010) Ny rafitra ara-pahasalamana nasionaly dia misy sehatra tsy miankina na ho an'ny daholobe. Ny tsy miankina
Fiantsenana ao Ouganda !!
Desambra 1, 2019 Demi zavatra atao, Oganda
Kampala dia tanàna mahavariana ho an'ny mpiantsena satria mora vaky daholo izay rehetra ilainao. Fomba goavambe avy amin'ny lohahevitra lamaody eran-tany, fivarotana grika, elektronika, tokantrano, fanomezana ary maro hafa. Ny ankamaroan'ny miantsena ao Kampala dia mifantoka amin'ny toeram-pivarotana lehibe
Toerana tsara indrindra hitsidihana any Uganda !!
Toerana hitsidihana any Oganda !! I Oganda, amin'ny ankapobeny, dia toerana azo antoka sy mahavariana. Tany ipetrahan'ny hipopotama mamaky ny tany mando sy ny liona misavoana ao amin'ny akasia. Tany feno ala feno pentina sy havoana manjavozavo izy io
Desambra 1, 2019 Demi trano fandraisam-bahiny, Oganda
Hotely any Oganda !! 1) Kintana Shangri-la Hotel Kampala 4.0 kintana - Google Rating Hotely kintana 3 Shangri-la Hotel Uganda no iray amin'ny Hotely azo antoka sy afovoany indrindra ao Kampala. Eo amin'ny toerana misy azy eo amin'ny Kampala Club malaza. Miaraka amin'ny mafana